ဂိမ်းအကြာကြီးဆော့ရင် ဘာလို့ခေါင်းကိုက်တာလဲ? | OnDoctor
ယနေ့ခေတ်မှာ အင်တာနက်၊ မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးစွဲမှုများလာတာနဲ့အမျှ ဖုန်း၊ ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုပြီးဆော့ရတဲ့ ဂိမ်းတွေဟာလည်း လူတိုင်းနဲ့မကင်းနိုင်တဲ့ ဖျော်ဖြေရေးကစားနည်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ Esport ကစားခြင်းနဲ့ Game streaming တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းတွေဟာ လူငယ်တွေကြားမှာ အလွန်ရေပန်းစားလာတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဂိမ်းတွေကိုအကြာကြီး ဆော့ကြတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ဂိမ်းဆော့ခြင်းကြောင့် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဂိမ်းအကြာကြီးဆော့တတ်သူတွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ခံစားရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂိမ်းအကြာကြီးဆော့ရင် ဘာလို့ခေါင်းကိုက်တာလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြပေးပါမယ်။
ဂိမ်းအကြာကြီးဆော့တဲ့အခါ screen မျက်နှာပြင်မှ ထွက်သောအလင်းတန်းများနဲ့ ဂိမ်းကစားခြင်းကို တောက်လျှောက် မျက်စိအာရုံစိုက်ရတဲ့အတွက် မျက်လုံးညောင်းညာ eyestrain ရပြီး ခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။ ဂိမ်းဆော့တဲ့အခါ သတိမမူမိဘဲ မေးရိုးကြွက်သားတွေကို (TMJ disorder) တင်းထားမိရာမှတဆင့် လည်ပင်းနှင့်ဦးခေါင်းရှိ ကြွက်သားများသို့ ပျံ့နှံ့ပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်း ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အမေရိကန်လူမျိုး (၁၀)သန်းခန့်ဟာ TMJ headache မေးရိုးပြဿနာကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ခံစားနေရလျက်ရှိကြောင်း စစ်တမ်းများက ဖော်ပြထားပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အနေအထား ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ အချိန်ကြာကြာ ဂိမ်းဆော့ခြင်းကြောင့်လည်း ကြွက်သားများတောင့်တင်းပြီး ညောင်းညာခြင်းခံစားရကာ ခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။ ဂိမ်းဆော့တဲ့အခါ ဦးခေါင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းဟာ ဂိမ်းဆော့သည့် မျက်နှာပြင်ဘက်ကို ငိုက်ပြီး ကိုယ်နေဟန်ထား မမှန်တဲ့အတွက် Upper crossed syndrome ခေါ် လည်ပင်း၊ ကျောနှင့် ပုခုံးကြွက်သားများ ဒဏ်ဖြစ်ရာမှ ဦးခေါင်းကြွက်သားများ တောင့်တင်းပြီး Tension headache ခေါင်းကိုက်ခြင်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းကို အချိန်အကြာကြီး တောက်လျှောက်ဆော့တဲ့အခါ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းဖို့ မေ့လျော့တတ်တဲ့အတွက် ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်လို့လည်း ခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။
တချို့ဂိမ်းအမျိုးအစားများက မြင်ကွင်းရှူထောင့် ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်သည့် ဂိမ်းများဖြစ်ပြီး ဂိမ်းကစားသူ၏ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှု မပြုပဲ မျက်လုံးရွေ့လျားမှုဖြင့် လှုပ်ရှားနေရသကဲ့သို့ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလိုဂိမ်းများကို အကြာကြီးဆော့ရင် ကားမူးသကဲ့သို့ လှုပ်ရှားမှုကြောင့် မူးဝေခြင်း motion sickness ဖြစ်ကာ ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ဂိမ်းကို ညဖက်အချိန်ကြာကြာ ဆော့တတ်သူတွေဟာ ညအိပ်ယာဝင်ချိန် နောက်ကျတာ၊ အိပ်ရေးပျက်တာ၊ အိပ်ရေးမဝတာစတဲ့ အိပ်စက်အနားယူခြင်းကို ထိခိုက်မှုဖြစ်စေပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်း ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဂိမ်းအချို့တွင် ပါဝင်သော ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း အလင်းရောင်များက အတက်ရောဂါရှိသူများအတွက် အလင်းလှုံ့ဆော်မှုကဲ့သို့ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတက်ရောဂါ ရာဇဝင်ရှိသူများအနေနဲ့ ဂိမ်းကြာကြာဆော့ခြင်းကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းဝေဒနာကို ကနဦးခံစားရပြီးနောက် တက်တတ်သည်ကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ရောဂါ Migraines ခံစားရလေ့ရှိသူများတွင် ဂိမ်းအကြာကြီးဆော့ခြင်းကြောင့် light sensitivity အလင်းရောင်လှုံ့ဆော်မှု ပိုများစေသဖြင့် ခေါင်းပိုကိုက်တတ်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရင်းများဟာ ဂိမ်းကို အချိန်ကြာကြာဆော့တဲ့အခါ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်သော အကြောင်းရင်းများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂိမ်းဆော့ခြင်းကို အချိန်ကန့်သတ်ပြီး၊ မိနစ် ၂၀-၃၀ ခြားတစ်ခါ မျက်လုံးအနားပေးပြီး အစိမ်းရောင်ရှိသော အရာဝတ္ထုများကို ကြည့်ပေးခြင်း၊ ရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင်သောက်ခြင်း၊ ကိုယ်နေဟန်ထားမှန်အောင် ဂရုစိုက်ပေးခြင်း၊ ကွန်ပြူတာ၊ ဖုန်းမျက်နှာပြင်များကို အလင်းမဖောက်သည့် အကာအရံ screenguard နှင့် blue light ကာကွယ်ပေးသည့် မျက်မှန်များ အသုံးပြုပေးခြင်းတို့ဖြင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို အထိုက်အလျောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Author: Dr. Yee Mon
လူတွေလတ်တလော စိုးရိမ်နေကြတဲ့ Monkeypox (မျောက်ကျောက်ရောဂါ)
သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို ဘယ်လိုအရာတွေက အဟန့်အတားဖြစ်စေလဲ?
မိုးမိပြီး အရိုးအဆစ်တွေ ကိုက်ခဲတဲ့အခါ
အအေးသောက်ခြင်းက ဘာကြောင့် ချောင်းဆိုးစေတာလဲ?
ကလေးတွေ မိုးရာသီမှာ အဖြစ်များတဲ့ ဝေဒနာများ